सर्वेन्द्र खनाललाई खुल्ला पत्र : के भिडियो कै आधारमा रविलाई अपराधी मान्न मिल्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सर्वेन्द्र खनाललाई खुल्ला पत्र : के भिडियो कै आधारमा रविलाई अपराधी मान्न मिल्छ ?
सर्वेन्द्र खनाललाई खुल्ला पत्र : के भिडियो कै आधारमा रविलाई अपराधी मान्न मिल्छ ?
भदौ ८ गते, २०७६ - १५:४३
महानिरीक्षक ज्यू, नमस्कार !
महानिरीक्षक ज्यूलाई म सिधै विषयमा नै प्रवेश गराउन चाहन्छु । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण र त्योसँगै पत्रकार रवि लामिछानेसहितका अन्यलाई पक्राउ गरिएको विषयमा म केहि लेख्न बाध्य भएको छु । मर्नुभन्दा पहिले नै शालिकराम पुडासैनीले रबि लामिछाने, युवराज कंडेल र अस्मिता कार्कीको कारणले आत्महत्या गरेको बताएका छन् । जसको भिडियो फेला परेको छ । महानिरीक्षक ज्यू, यो घटनामा भेटिएको अहिलेसम्मको मुख्य प्रमाण यति मात्र होइन् र ?
यो मुद्दा शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यासँग सरोकार भएको मुद्दा हो । मेरो बुझाईमा रवि लामिछाने, युवराज कंडेल र अस्मिता कार्कीलाई फसाउनलाई नै गरेको यो षड्यन्त्र गरिएकाे जस्तो देखिन्छ । शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गरेको होइन शालिकराम पुडासैनीको हत्या भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।
प्रहरी महानिरीक्षक ज्यु, तपाईंलाई केही कुराहरू ध्यानाकर्षण गराउन गइरहेको छु । यसभन्दा पहिले पनि रबि लामिछानेको नाम बदनाम गराउने मनसायले उहाँको पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद नभई नै निकिता पौडेलसँग विवाह गरेको भनेर अति चर्चाको विषय बनाइएकाे थियाे । आखिरमा रबि लामिछानेले निकिता पौडेलसँग विवाह गर्नुभन्दा पहिले नै सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका रहेछन । योजनाकारहरु पहिलो योजनामा रबि लामिछानेको नाम बदनाम गराउनमा असफल भए।
प्रस्तोता रबि लामिछानेको सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका कारण धेरै भ्रष्टाचारीहरु, माफियाहरु र नेताहरू आज नांगेझार भएका छन् । उनिहरुको लुटको महलमा रवि र उनको कार्यक्रम आज बाधक बनेको छ । यो सबैतिरबाट छर्लङ्ग भएको विषय हो । रवि लामिछानेले न्यूज २४ मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि धेरै समाजका कुतत्वको निद हराम भएको कुरा यहाँलाई पनि प्रष्टै छ ।
महानिरीक्षक ज्यु, तपाईंलाई कसैले तपाईं अपराधी हो भन्दैमा के तपाईं हत्यारा हुनु हुन्छ र ? के कुनै जिम्मेवार क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई कसैले अपराधी भन्दैमा वा हत्यारा भन्दैमा त्यसले भनेको बोलीका आधारमा मात्रै अपराधी वा हत्यारा मान्न मिल्छ र ?
आत्महत्याकै कारण सबै हत्यारा बन्ने हो भने प्रहरी महानिरीक्षक ज्यु, भोलिको आउने दिनहरुमा प्रहरीहरुलाई अपराधी पक्राउ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । प्रतिशोधको भावनाले मानिसको आत्महत्या गर्ने विकृति र चाहना पनि बढ्दै जान्छ। के यसतर्फ ध्यान आवश्यक छैनन् र ? अनि अर्को कुरा पुडासैनीको मानसिक रोगको विषयमा पनि कुराहरु बाहिर आएको छ । के एक मानसिक रोगीले केहि गलत आरोप लगायो भने त्यो स्वीकार्य हुन्छ र ? मेरो बुझाई अनुसार अदालतमा पनि मानसिक रोगीहरुको भनाईलाई त्यति महत्व दिइन्न ।
महानिरीक्षक ज्यु, प्रहरी संगठनहरुमा पनि रबि लामिछानेको फ्यान वा साथीहरु धेरै छ्न । भोलि यही रबि लामिछानेको विषयवस्तुलाई लिएर प्रहरी संगठन भित्र विद्रोह भयो भने के गर्नु हुन्छ ? यसकारण मुलुकमा आगो लाग्नुभन्दा पहिले बुझाउन ठिक हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ । बरु पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको हत्या गर्ने वास्तविक हत्याराको पत्ता लगाउने काम गरेमा यसले पत्रकार शालिकरामको आत्माले पनि शान्ति पाउने छ । प्रहरी महानिरीक्षक ज्यु मैले गलत कुरा लेखेको भएमा क्षमा प्रार्थी छु । बाँकी हजुरको विचार ।
स्वतन्त्र नेपाली नागरिक :
जिल्ला मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं.०२
मोबाइल नं. : ९८४८०५५७७६ र ९८१२४९१३९७
भदौ ८ गते, २०७६ - १५:४३ मा प्रकाशित